Enomtsalane Mill House, 1 iyure ukusuka Paris
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguJill
Kufuphi neSens, engekude neChablis, Fontainebleau, kunye neChampagne ilizwe. Ifanelekile kuhambo lwemini ukuya eDisneyland Paris. Uya kuyithanda le ndawo kuba indlu yam yokusila ijikelezwe yipaki ethandekayo enzulu emaphandleni ene-roedeer, kunye nonomatse obomvu. Imizuzu eli-10 ukuya kwiSens kwiivenkile kunye nokutya kunye nePont-sur-Yonne kwintengiso yasekhaya. Indawo yam ilungile kwabatshatileyo, abantu abahamba bodwa, abahambi ngamashishini, iintsapho (ezinabantwana), kunye nabahlobo abanoboya (izilwanyana zasekhaya).
Imbonakalo entle njengakumgangatho wokuqala, ifikelelwe zizinyuko ezizimeleyo ezijikelezayo. Amagumbi amabini okulala amabini (enye enebhedi enye eyongezelelweyo), ikhitshi evulekileyo yeplani / indawo yokuhlala (enebhedi yesofa). Isitovu sokutshisa iinkuni. Igumbi lokuhlambela kunye neWC eyahlukileyo. Kwiintsapho ezinabantwana kunokwenzeka ukuba zisebenzise ibhedi yesofa ukwenzela abantu abancinci abancinci bokulala.
Indawo entle yasemaphandleni ejikelezwe ngamasimi kunye nehlathi. Ukuhamba kwelizwe elithandekayo okanye ukukhwela ibhayisekile ukusuka emnyango okanye uphumle nje kwipaki enkulu kwipropathi enomlambo wayo omncinci.
Njengoko undwendwe lukhetha
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- La Chapelle-sur-Oreuse